पहिला भू’कम्पले भत्कायो आज फेरि ७० लाख ऋण लिएर बनाएको ३ तले घर बाढीले लग्यो ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/पहिला भू’कम्पले भत्कायो आज फेरि ७० लाख ऋण लिएर बनाएको ३ तले घर बाढीले लग्यो !
इन्द्रावती नदीले कटान जारी राखेको छ । असार १ र ३ गते आएको भीषण बाढी पनि थामिइनसकेको स्थानीयले बताएका छन् । मेलम्चीको मुहान भ्रोमथाङ क्षेत्रमा खसेको पहिरोका कारण अहिले पनि मेलम्ची नदीले लेदो ल्याइरहेको छ ।
त्यही लेदोका कारण इन्द्रावतीले मेलम्ची बजार क्षेत्रमा कटान गरिरहेको र बिहानै गोपाल दुलालको तीनतले घर बगाएको स्थानीयले बताएका छन् ।
असार १ गतेको बाढीले उनको घर तलको धानखेत बगाएको थियो । खेत बगाए पनि खोलाले धार परिवर्तन गरेका कारण घर जोगिएका थियो । तर, शनिबार बिहानैदेखि नदीको बहाव बढेको र घर बगाएको स्थानीयको भनाइ छ ।
अहिले मेलम्ची, इन्द्रावती नदीको दुवैतर्फ तटबन्द बनाउन त सुरु गरिएको छ । तर, अविरल वर्षात्का कारण कटानमा कमी नआएको स्थानीयले बताएका छन् ।
२०७२ सालको विस्मयकारी भूकम्पले उनको घर–गोठ खण्डहर तुल्यायो । धूलो टक्टक्याएर उठ्न उनलाई झण्डै चार वर्ष पर्खनुपर्यो । यसबीचमा उनले बगाएको पसिना बेहिसाब छन् ।
तर, दुई वर्ष नबित्दै उनलाई अर्को बज्रपात परेको छ । उनी अहिले आँखै अगाडि बग्दै गरेको घर, पसिना बगाएर उब्जायोग्य तुल्याएको खेत बगर बनेको हेर्न अभिशप्त छन् ।
“हिजो राति सबैजना झिटी–गुन्टा गुठाएर हिँडे । लालाबाला च्यापेर सुरक्षित स्थानतिर लागे । मचाहिँ बगाए पनि बगाओस् भनेर निच मारेर यहीँ बसेँ । जानु पो कहाँ थ्यो र ?,” उनको बोलीमा अनिर्वचनीय पीडा झल्कन्छ ।
झण्डै ७० लाख खर्च गरेर उनले तीन तला घर उभ्याएका हुन् । अझै निर्माण कार्य पूरा हुन बाँकी छ । रङरोगन नसक्दै बाढीले उठेर जा.. भन्न आएपछि आफू निरुपाय भएको र प्रकृतिसँग हात जोडेर याचना गर्नुबाहेक अरू विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।
“घर नजिकै पीपल रोपेको छु । मेलम्ची बजारको दुर्दान्त हेर्दा मेरो घर कसरी बचिरहेको होला लाग्छ । यसो सोच्छु आज रातिसम्म त पक्कै लगिहाल्छ,” उनी भावुक हुँदै सुनाउँछन्, “केही गर्न सकिँदो रहेनछ त !”
उनी वृद्धतिर उकालो चढ्दैछन् । झण्डै १२ जनाको परिवार छ । छोरा–नातीकै लागि भनेर केही जायजेथा बेचे । केही ऋण गरेर घर उभ्याए । अहिले घरछेउबाट खोलो हिँड्दा मन त्यसैत्यसै भक्कानिएर आएको छ । डाँको छाडेर रुन मन लागेको छ ।
घर मात्रै लगे त फेरि उभ्याउन हुन्थ्यो । भूकम्पले ढलाएको घर पनि उनले मिहिनेतले उभ्याएकै हुन् । घर वरिपरिको साढे दुई रोपनी खेत पनि बगर बन्न लागेपछि उनलाई प्रकृतिदेखि उदेक लागेर आएको छ । छातीमा आक्रोशको ज्वाला दन्कँदो छ ।
निर्धोलाई नै ङ्याक्ने प्रकृतिको प्रवृत्ति देखेर एक मन त उनलाई विरक्त पनि लाग्छ । तर, अहिले आफ्नो मात्र होइन भनेर आफैँलाई थामथुम पारेका छन् ।
“मेरो घरबाट खोलामा पुग्न झण्डै दसमिनेट लाग्थ्यो । अहिले करेसामा खोलो सुसाइरहेको छ । कतिबेला लाने हो पत्तो छैन । त्यत्रो बजार बगर बनाइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “अरूको हेरेर पनि चित्त बुझाएको छु ।”